စ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
စိတြဂီဝါ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
စုံတောမြိုင်။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွှန်။ ဆို - မကြည်အောင်။
စင်သီ။ ရေး - SNO ။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
စိတ်ကူးသက်သက်များ။ ရေး - ညီညီသွင်။ ဆို - အဲလက်စ်။ စီးရီး - စိတ်ကူးသက်သက်များ။
စိတ္တဇအလွမ်း။ ရေး - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်။ ဆို - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ရွှေထိုက်။ စီးရီး - Happy SAI SAI Birthday
စိတ်ထွက်ပေါက်။ ရေး - ဇ၀ါ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
စိတ်နာတယ်။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
စိတ်နဲ့ကျုပ်နဲ့ ညစ်တယ်ဗျို့။ ရေး - စိုးလွင်လွင်၊ ကိုလတ်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
စိတ်မပျက်ဘူး။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - ဟန်ထွန်း။ စီးရီး - ရှိနေမယ်။
စိတ်လျှော့လိုက်။ ရေး - ဖိုးကာ။ ဆို - R ဇာနည်။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
စိတ်အနာ။ ရေး - ဟန်ထူးလွင်။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
စန္ဒီ။ ရေး - ငယ်ဆူးသစ်။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
စွယ်တော်ခိုးခန်း။ ရေး - နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်။ ဆို - မကြည်အောင်။